musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Martinique Kupwanya Nhau » Vols kubva kuU.SA kuenda kuMartinique paAmerican Airlines izvozvi
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Caribbean • Martinique Kupwanya Nhau • nhau • vanhu • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau
Vols kubva kuU.SA kuenda kuMartinique paAmerican Airlines izvozvi.
American Airlines ichashandisa iyo Embraer 175 ndege ine zvigaro makumi manomwe nenomwe dzendege nhatu nehafu-awa dzendege kubva kuUSA kuenda kuMartinique.
Iine nzvimbo dzinopfuura makumi matatu neshanu kuzvitsuwa, American ndiyo ndege yako kuFrench Caribbean Island yeMartinique.
American Airlines, kambani hombe yendege yeUS, yakakosha kwenguva yakareba shamwari yeChitsuwa cheMaruva.
Kutanga Mbudzi 6, American Airlines ichatanga basa rayo risingamire pakati peMiami International Airport neAimé Césaire International Airport yeFort-de-France.
Vols kuMartinique kubva kuUnited States vachatangazve nekuda kweAmerican Airlines. Kutanga Mbudzi 6, anotakura achatanga basa rayo risingamire pakati peMiami International Airport neAimé Césaire International Airport yeFort-de-France. Ndege idzi dzinoshanda kamwe chete pasvondo neMugovera isati yawedzera kusvika katatu pavhiki Chipiri, China neChishanu neMugovera weKisimusi uye hafu yechipiri yaKukadzi kusvika Kurume.
"American Airlines, kambani hombe yendege yeUS inoshamwaridzana kwenguva refu neChitsuwa cheMaruva", "anodaro Martinique Tourism Commissioner Bénédicte di Geronimo. "Ndosaka tichifara kugamuchira zvakare mutakuri wedu mukuru weUS uye vese vakatakura nemaoko maviri. Kuona Martinique kuchanyatso kubvumidza vashanyi vedu vekuUS nezve chikonzero nei Martinique yakagamuchira nguva pfupi yadarika Goridhe kukudzwa muTravel Weekly's 2021 Magellan Awards seEco-Inoshamwaridza "Green" Destination, yakatumidzwa zita rekuti # 1 Emerging Destination munyika muna 2021 naTripadvisor , tisingaverenge maviri misiyano yakapihwa nguva pfupi yadarika neUNESCO kune yedu yakasarudzika yechinyakare Yole Boat pamwe nekupfuma kwezvinhu zvedu zvipenyu ".
"Nenzvimbo dzinopfuura makumi matatu nemashanu kuenda kuzvitsuwa, American ndiyo ndege yako kuFrench Caribbean Island yeMartinique, akadaro Evette Negron, Channel Sales Manager kuAmerican Airlines. "Zvinofadza chaizvo kupa vafambi vekuAmerica mukana wekuwana runako uye nhoroondo yakapfuma yeMartinique mukuchengeteka kwese, kubva panguva yekusunga bhande ravo."
Ndege yeEmbraer 175 ine zvigaro makumi manomwe neshanu ichashandiswa kwendege nhatu nehafu-awa.